Rambox: Dhammaan-in-One Fariinta iyo Adeegyada Email | Laga soo bilaabo Linux
Tirada codsiyada la is gaadhsiinayo ee jira maanta waa abysmal, midkastoo leh sifooyin iyo ujeedooyin si wanaagsan loo qeexay, taas oo xitaa noo horseedda inaan dhowr ka mid ah isku mar isticmaalno.
Telegram, WhatsApp, Skype, Slack, Gmail, oo aan ku magacowno wax yar, ayaa ah dhufto ee isgaarsiinta inbadan oo naga mid ah ay u adeegsadaan maalin-maalinkasta iyo maaraynteeda marar badan nolosheena ayay xoogaa ku adkaatay.
Si looga caawiyo hagaajinta wax soo saarkeena marka aan maareyneyno farriimahayaga iyo adeegyadeena e-mayl, Rambox, madal aad ugu eg caan Franz laakiin leh astaamo in ka badan hal jeclaan doono.
Rambox Horey ayey waqti yar ugu laheyd fagaaraha, laakiin cusbooneysiintii ugu dambeysay waxay saxeen dhowr ciladood oo noo ogolaanaya inaan ku raaxeysano qalab xasiloon. Intaas waxaa sii dheer, abuuraha wuxuu raadinayaa kafaalaqaad si uu usii wado balaarinta howlaha qalabkan weyn, marka waad aadi kartaa boggan in lala kaashado ujeedadiisa sharafta leh.
1 Waa maxay Rambox?
2 Astaamaha Rambox
3 Sida loo rakibo Rambox
4 Gabagabo ku saabsan Rambox
Waa maxay Rambox?
Waa ilo furan, qalab isku dheelitiran, oo ay soo saartay Ramiro Saenz, kaas oo noo oggolaanaya in aan hal barnaamij ka wadno wax ka badan 70 iimayl iyo adeegyo fariin ah. Si kale haddii loo dhigo, Rambox wuxuu ina siinayaa suurtagalnimada maaraynta chat-ka WhatsApp-ka, akhrinta boostadayada, la falgalka Twitter-ka, ku sheekaysiga Skype, Facebook, Linkedin… oo laga helo hal xiriiriye oo nadiif ah
Sidoo kale, barnaamijkan wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku darno adeegyo kale oo aan lagu heli karin markii hore, kaliya la falgalno api loo abuuray ujeedkan.
Rambox waa wax fudud oo hufan, oo leh isku-xirnaan abaabulan oo la jaanqaadi kara inta badan distros iyo bey'adaha desktop ee laga heli karo Linux. Waxay leedahay suurtagalnimada abaabulidda adeegyada aan u hayno firfircoonaan ahaan hadba sida aan u dhadhansanno.
Codsigan waxaa lala sameeyay adeegsadayaasha maanka ku haya in ka badan hal qalab isgaarsiineed, taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay si dhakhso leh oo nabadgelyo leh ula falgalaan adeegyada kombiyuutarka.
In kabadan 70 fariimo iyo adeegyo e-mayl ah oo la heli karo, oo ay ku jiraan adeegyada sida skype, twitter, facebook, slack, telegram, whatsapp, gmail, zimbra iyo kuwa kale.
Multiplatform (Linux, Windows iyo MacOS).
Nadiif ah oo abaabulan interface.
Suurtagalnimada inaad ku yeelato koonto adeegga Rambox, si aad u awoodo inaad isku waafajiso qaabeynta ka dhexeysa kombiyuutaradaada.
Kuu ogolaanayaa isticmaalka Wakiil.
Qalabaynta iyo keydinta qalabka.
Shaqeynta si looga hortago ogeysiisyada markii loo baahdo.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad xannibto adeeg loo adeegsado erey sir ah (Si aad uga ilaaliso wada hadalkaaga dadka daawadayaasha).
Orodka xagga dambe.
Isdhexgal toos ah oo lala yeesho adeegyada isgaarsiinta, iyada oo aan lahayn lakabyo dhexdhexaad ah.
Lagu soo saaray elektaroonig
Sida loo rakibo Rambox
Rakibidda Rambox waa wax iska fudud, kaliya soo dejiso xirmada la jaan qaadi doonta Linux distro-kaaga halkan, oo ku rakibo maareeyaha xirmooyinka aad jeceshahay.
Arch Linux iyo adeegsadayaasha soosaara ayaa Rambox ka soo dejin kara AUR, adoo adeegsanaya amarka soo socda:
Kadib waxaad ka heli kartaa qalabka qaybta Internetka ee ku yaal liiska dalabkaaga.
Gabagabo ku saabsan Rambox
Rambox waa codsi waxtar weyn u yeelan kara kuweena adeegsada fariimaha kala duwan iyo adeegyada iimaylka maalin kasta, gaar ahaan kuwa naga mid ah ee doonaya in ay sida ugu yar ee suurtogalka ah ula falgalaan taleefanka gacanta.
Qalabkan awoodda badan wuxuu inta badan ka kooban yahay macaamiisha websaydhka mid kasta oo ka mid ah farriimaha iyo adeegyada iimaylka, sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay jiraan xaddidaado kala duwan oo gaar u ah adeeg kasta.
Kani maahan codsi loogu talagalay dadka sida dhif ah u isticmaala adeegyada farriimaha, maxaa yeelay waxay noqon kartaa qashin aan loo baahnayn oo kheyraad ah. Sidoo kale, waxaa muhiim ah in la ogaado in adeegyada badan ee aad firfircoon tahay, inbadan oo ka mid ah kheyraadka Rambox cuno, nasiib daro ay tahay qiimaha ay tahay inaan ku bixino adeegsiga qalabkan weyn.
Abuuritaanka tan iyo aalado kale oo badan ayaa ku lug leh waqti badan oo ay maalgashadaan abuurayaasheeda, sidaas darteed ka qayb qaadashada dhaqaalaha iyo faafinta ayaa muhiim u ah mustaqbalkeeda, iyo sidoo kale dhiirrigelin abuurista hawlo cusub. .
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Rambox: Dhammaan Hal Fariin iyo Adeegyo Email
Kala saar dijo
Waan joojinayaa aqrinta markay tiraahdo 'elektaroonig', wali waxaan arkaayey inay soo socoto XD
Haddii aysan ku jirin bakhaarka, ha aaminin.
Taas gebi ahaanba waan ku raacsanahay
Waa wax weyn, imtixaan iyo 10. Su'aal:
Ma noqon karaa luqadda? Waxay ku qoran tahay Ingiriisi ahaan.
Waxay ila tahay aniga inaysan ka badneyn biraawsar. Waa inaan sifiican u fiiriyaa, laakiin waxaan u arkaa wax walba si isku mid ah sida haddii aan dhigo tabs ah chrome.
Jawaab ku bixi Sergio Perea
Waxay yihiin codsiyo kooban, taas oo ah, arjiga websaydhka ee ku lifaaqan elektaroonig.
Sida loo xaliyo google captcha si toos ah ReBreakCaptcha